Fumana ukuchaneka kwe-submeter kwi-iPad / kwi-iPhone-Geofumadas
NgoFebruwari, 2015 GPS / Izixhobo, Ukuprinta kokuqala
Isamkeli seGPS sesixhobo se-iOS, esifana ne-iPad okanye i-iPhone, sifumana ukuchaneka ngokokulandelelana kwaso nasiphi na esinye isikhangeli: phakathi kweemitha ezimbini ukuya kwezi-2. Ngaphandle kwe GIS Kit, ezimbalwa ezinye izinto esizibonayo ukuphucula ukuchaneka kwayo, nangona kunjalo ngenxa yokubonisana nomhlobo, siyifumana into enomdla ukuba sijonge le nto yokudlala eyayihluke Ukunyanzelisa Oku kudibaniswe kwizixhobo eziphathekayo.
Ngaphandle kokujongeka njengesixhobo esilula, uMvavanyi we-Bad Elf GNSS ngumamkeli omtsha nonamandla othi, ngeBluetooth, anike isixhobo esiphathwayo ukhetho lokuba ngumamkeli we-GNSS, kubandakanya inzwa ye-barometric yokufumana ukuphakama ngaphezulu kwenqanaba lolwandle. Kubhabho lusebenza njengesikhangeli, kodwa kwimowudi emileyo, inokufezekisa ukuchaneka kwemitha engaphantsi kusetyenziswa i-SBASS, ngenkxaso yasemva kokuqhutywa (DGPS) yokufikelela kumaxabiso phakathi kweesentimitha ezili-10 ukuya kuma-50.
Inokusetyenziswa kunye namadivayisi we-5 ngexesha elifanayo nge-Bluetoot.
Ngenxa yexabiso elinalo, liyalinga, kuba libonakala lincomekayo yokuphakamisa ngokuchanekileyo ngokuchanekileyo kwixabiso eliphantsi.
Ingqinisiso echanekileyo ngayo uMqhubi we-Bad Elf GNSS
UkuPhakamisa okuPhambili kwePawulo (PPP): kwizicelo ezimileyo ezinokubonakala okuhle. I-PPP isebenzisa umqondiso wesigaba sokuphatha ukunciphisa ukugqwetha kwe-ionosphere kunye neempawu zendlela ezininzi. Oku kubonelela ngokuchaneka kwemitha enye ngaphandle kokubhekisa kwizikhululo zasekuhlaleni okanye eminye imithombo yoluleko.
IiNkonzo zokuNyuselwa koNyaka (SBAS)Ngeqela leesathelayithi, i-SBAS ibonelela ngokulungiswa kwedatha ye-orbit, iwotshi, kunye neengxaki ezinxulumene nemozulu okanye izitishi ezibhekisa emhlabeni. Umyinge ubandakanya iNyakatho Melika (WAAS), iJapan (MSAS), iYurophu (i-EGNOS), kunye ne-India (GAGAN). I-SBAS ngokwayo ibandakanya indawo ethe tyaba kunye nokuchaneka kweemitha ezi-2 ukuya kwezi-2.5.
Ukulungiswa kwe-GPS eyahlukeneyo (D-GPS): Ukulungiswa olukhoyo ugqitha izikhululo naphi na ehlabathini isiseko, okusingqongileyo GNSS ixhasa ushishino standard RTCM 2.3 for ukusebenza njengoko D-GPS lihamba.
I-post-processing yedata eluhlaza kwi-RTKKwizicelo apho kufuneka ubuchwephesha obungcono (ukusuka kwi-10 ukuya kwi-50 yeesentimitha), idatha eluhlaza kunye nemilinganiselo ye-SBAS iyafumaneka kusetyenziso lwasemva kwexesha kunye nokusetyenziswa kwe-real-time kinematic (RTK). Le datha iyafumaneka nge-SDK kunye neefayile ze-log ezigcinwe kwimowudi ezimeleyo.
Umvavanyi we-Bad Elf GNSS unokubonelela ngedatha ye-GPS kwimowudi yokusasaza yeNMEA ngeBluetooth okanye i-USB yezixhobo ezingezizo ze-iOS, ezinje ngeefowuni ezisebenza nge-Android, iWindows, iMac OS X okanye iLinux. Nangona okwangoku inkxaso yala maqonga inqongophele.
Igrafu elandelayo ibonisa indlela ekulinganisweni ekuqaleni kwinqanaba leempawu ezikufutshane neemitha ezintathu, iyancipha ukuya kumitha ezimbini, umlinganiselo wesigxina uyamkeleka phambi kwemizuzu emine.
Iimpawu ze-GPS Iinkcukacha ezimbi ze-Elf GNSS.
Ukuchaneka kwe-GNSS ngaphantsi komitha omnye kwindlela ehleliweyo, suando SBASS + PPP.
Ukuchaneka kwe-10 ukuya kwi-50 cm usebenzisa usetyenziso lwasemva kokulungiswa. Kwixesha elizayo bathembisa i-SDK kuphuhliso lomntu wesithathu.
Uncedisa ukusahlula emva kokusasazwa (DGPS), usebenzisa ulungiso lwe-RTCM ukusuka kwinethiwekhi yezikhululo zendawo.
Ukufumana i-56 GPS, izithuthi ze-GLONASS kunye ne-QZSS kunye ne-SBASS (WAAS / EGNOS / MSAS)
Ekuhambeni kunika ukuchaneka kweGPS kweemitha ze-2.5.
Isilinganiso sesampula esilungiselelwe kwi-10 Hz.
Imodi ebonakalayo, iGPS + GLONASS kwisikrini esicacileyo seLCD.
Ubomi bebhetri, ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-35. Nangona ixhasa ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-200 kungekho ndlela yokwamkela.
Ingabonwa kwi-PC ngekhebula le-USB, libukeka ngathi ipeni yokuqhuba.
Inketho yokuxhumeka kwindlela yokusakaza kwi-PC okanye kwi-Mac.
Kubandakanya i-barometer ukufumana ukuphakama.
Ukuqala okushushu ngokukhawuleza njengomzuzwana omnye, ukwamkelwa kwesathelayithi ngaphandle kokuxhomekeka kwinqaba yomnxeba. (Ayifuni i-intanethi ukufikelela kwi-GPS).
Ingasetyenziselwa ukufikelela kwii-mitha ze-18,000, kwimeko yokuhamba kwe-air, kunye nokukhawuleza ukuya kwiikhilomitha ze-1,600 ngeyure.
Isixhobo sisebenza sodwa, siphucula ukuchaneka kokufumana phantse nasiphi na isicelo se-iOS, kodwa sifuna ukudityaniswa kusetyenziswa i-Bad Elf SDK ukufikelela kwiimpawu eziphambili. Ukuza kuthi ga ngoku abavelisi bayo baqale ukusebenza ngokunyaniseka kunye nabaphuhlisi abaninzi abaxhaswe sisicelo se-GNSS.
Xa kuthengwa isixhobo kuza kuquka:
BE-GPS-3300 GNSS ifowuni yokuthwebula.
Ikhebula le-90cm ye-USB yokuthengisa amandla.
Ishaja yemoto 12-24 volts.
I-Detachable Neck Lanyard.
Iyahambelana ne-iPod, i-iPad kunye namadivayisi e-iPhone:
Isizukulwana sesihlanu se-iPod touch.
iPhone 5S, 5C, 5, 4S, iPhone 4, 3GS iPhone, kunye iPhone 3G.
I-iPad Air, i-iPad (yesithathu neyesine), i-iPad 2, i-iPad.
I-iPad mini ne-Retina bonisa, i-iPad mini.
Ixabiso lokunyusa liya kwiidola ze-499.
Akukubi, xa kuthelekiswa neqela elilinganayo leempawu ezaziwayo, ukuya kuthi ga kwi-1,900 yeedola- okanye nangaphezulu. Ezinye zezona zinto zibalaseleyo ndizibonileyo kwisisombululo esinexabiso eliphantsi sokujonga, nangona kufuneka kuvavanywe ukuqinisekisa ukuba iyavakala kuthengiso oluninzi lweprojekthi enkulu.
Apha ungabona ulwazi oluninzi.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Umphathi Spatial khona ukuze Bricscad
Post Next I-geomarketing vs. Ubumfihlo: Impembelelo yeGeolocation kumsebenzisi oqhelekileyoOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-3 "zokufumana ukuchaneka kwe-Submeter kwi-iPad / kwi-iPhone"
Dan Ericson uthi:
JAG Är av i stort behov instruktioner Bad ELF GPS kaHuri kaHuri jag pro fungerar skall Kuba ATT Stalla emngxunyeni ATT fa den funka så som noggrant möjligt
Ndingayifumana phi eMexico?
xabisa kakhulu ukuchaneka okuthe ngqo